रातोपाटीको 'बालसंसार'मा रचना पठाउनुहोस् | Ratopati
रातोपाटीको 'बालसंसार'मा रचना पठाउनुहोस्
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ९, २०७७ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । हरेक मान्छेमा प्रचुर सृजनशीलता हुन्छ । तर आफ्नो सिर्जना प्रस्फुटन गर्न पनि कुनै न कुनै माध्यम चाहिन्छ । अझ बालबालिकाले आफ्नो सिर्जना प्रस्फुटन गर्ने कुनै माध्यम पाए भने थप हौसला प्राप्त हुन्छ र उनीहरुले आफ्नो सृजनशीलतालाई निखार्न थप सहयोग पुग्छ ।
यसैपनि अहिले लकडाउनको समय छ । विद्यालय बन्द भएर फुर्सदिला रहेको बालबालिकाले यो बखत बाल कथा लेख्न सक्छन् । कविता लेख्न सक्छन् या निबन्ध लेख्न सक्छन् । थरीथरीका चित्र पनि कोर्न सक्छन् ।
आफूले गरेको रचना वा सिर्जना कतै छापियोस् भन्ने चाहना पनि हुन्छ । त्यसका लागि बालबालिकाले आफ्नो अभिभावकको सहायता लिएर रातोपाटीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ । रातोपाटीले आफ्नो बालसंसार पृष्ठमा स्थान दिनेछ ।
रातोपाटीका संस्थापक प्रधान सम्पादक ओम शर्माले आफ्ना बालबालिकाले कोरेको चित्र, लेखेका बाल कविता, कथा जस्ता विविध सिर्जनात्मक र रचनात्मक बाल सामग्रीलाई रातोपाटीले बालसंसार पृष्ठमा स्थान दिने बताए ।
बालबालिकाको रचना र सृजनामात्रै होइन बाल संसार पृष्ठमा सामान्य ज्ञानसम्बन्धी जानकारी, विभिन्न बालकथा, नीति कथा, प्रेरक कुरा, अनौठो कुरा र विविध विषयवस्तुबारे पढ्न सकिन्छ । जसले बालबालिकामा ज्ञानको दायर बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।
के तपाईंहरु आफ्ना सृजना तथा रचना रातोपाटीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने [email protected] र [email protected] मा इमेल गर्न सक्नु हुनेछ । सक्नुहुन्छ आफै पठाउनुस्, आफूलाई इमेल चलाउने ज्ञान छैन भने पनि केही छैन आफ्ना अभिभावकलाई भनेर माथि दिइएको ठेगानामा पठाउनु हाेला नि है ! सामग्री पठाउँदा आफ्नो नाम, ठेगाना, स्कुल र कक्षाका साथै उमेर पनि पठाउन नभुल्नु है !
महिला तथा बालिका कहिलेसम्म त्रासमा बाँच्ने ?
किन फरक फरक हुन्छन् नयाँ वर्ष ?
लोप भइसकेको पंक्षी डोडो
भारतीय सेनामा भर्ती हुन नौतनवामा नेपाली युवाको लर्को
पूर्वराष्ट्रपति यादवद्वारा चुरे संरक्षण हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त
अरुण–३ जलविद्युत परियोजना निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अघिनै सम्पन्न हुने
बकैयामा न्यायिक समितिबाट ८९ मुद्दाको किनारा